Xaawa Waxay Soo Bandhigtay Sensor-biyo Bixiyaha Iswaafaqsan ee HomeKit iyo Bedelka | Wararka IPhone
Toddobaadka soo-bandhigidda ee IFA 2019, maantana waxaan kuu keenaynaa warka mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee agabyada loogu talagalay 'HomeKit'. Eve waxay ka faa'iideysatay carwada Berlin inay soo bandhigto laba shey oo gebi ahaanba cusub: biiro kuxiran HomeKit oo ku haboon nidaamyada yurub (Eve Light Switch) iyo qalabka dareeraha biyaha (Eve Water Guard).
Intaa waxaa dheer ayaa bilaabay ku celcelinteeda 'HomeKit' taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xirto ilaa 8 qalab oo xaliya dhibaatooyinka kala duwan ee qalabka Bluetooth. Waxay sidoo kale soo bandhigtay nooc casriyeysan oo madaxeeda heerkulka heer sare ah Eve Thermo. Dhamaan faahfaahinta, hoosta.
Beddelidda dhammaan nalalka gurigaaga si aad uga dhigto mid la jaan qaada nidaamyada otomatiga ee guriga waa mid qaali ah, HomeKit-na kama reebna tan. Laakiin waxaan heysanaa bedel ah inaan beddelno dhammaan nalalka ku jira qolka: si aan u rogno batoonka. Sidan oo kale, oo leh hal qalab, waxaan horeyba u gaarnay in laydhka lagu xakamayn karo HimeKit iyo dhammaan faa'iidooyinka bixiya. Eve Light Switch waa biiro cusub oo la jaan qaadaya nidaamka yurubiyaanka ah ee u ogolaanaya tan, taasna waxay sidoo kale u shaqeysaa sida shuruudda caadiga ah, shidida iyo shidida laydhadhka markii la riixo. Waxaa laga heli doonaa Oktoobar Jarmalka, Belgium, Austria iyo Netherlands, waxaana rajeynayaa inay dhowaan ku fidi doonto Yurub inteeda kale.
Shayga kale ee cusub ee ay soo saartay shirkaddu waa Eve Water Guard, baare biyo daadinta oo kugula socodsiiya laydhadhka iyo dhawaaqa isla marka ay dhacaan waxyar oo biyo ahi. Waxaad sidoo kale heli doontaa ogeysiiska u dhigma ee ku saabsan iPhone-kaaga iyo Apple Watch, iyada oo ay ugu wacan tahay la-qabashadeeda HomeKit. Way ku habboon tahay markaa uma baahnid inaad sugto deriskaaga hoose si aad u hesho la yaab xun oo mashiinkaaga dharka lagu dhaqo u daadanayo. Ma hayno wali taariikh sii deyn.
Ugu dambeyntiina, astaanta ayaa cusbooneysiisay madaxeeda kuleylka leh (Eve Thermo) oo leh shaashad tayo sare leh iyo koontaroollo taabasho oo wanaagsan, iyo sidoo kale hawlgallo xasilloon. Eve Extend, ku celceliyaha kuu ogolaanaya inaad ku xirto qalabka Eve iyada oo loo marayo Bluetooth meel kasta oo ka fog koontaroolkaaga, hadda waa la iibinayaa. Waxaan ku falanqeyneynaa kanaalkayaga (isku xirka) wuxuuna xaliyaa mushkilad inbadan oo naga mid ah ay sugayeen cid wax ka qabata waqti dheer. Dhawaan waxaan ku heli doonnaa gudaha Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Eve waxay soo bandhigtay Sensor-biyo cusub oo iswaafajin kara iyo Beddelaad
Dhacdada soo bandhigida iPhone-ka waxaa lagula socon karaa YouTube-ka toos